Job vacancies | Century Beverage Co., Ltd. ﻿
စက်မှု(၂)လမ်း, ရွှေပြည်သာ, Yangon
336 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	Candidate with good Microsoft Office skill or experience with accounting software will be preferred Competency in Office and Accounting application •	Good communication & interpersonal skill.
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရိုးသား ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး နယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Must be able to have production knowledge in beverage. •	Must have good communication skills & Leadership skills.
•	Delivery Complaint ရှင်းနိုင်ပြီး တိကျစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (2) နှစ် ရှိရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။
•	Cash Book AP/ AR/ Bank/ Expenses အပိုင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြု နိုင်ရမည်။ •	စာရင်းဇယားတိကျစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
337 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	Must be familiar with English4skills. •	Havingadriving license will be more advantages. •	Can manage well to subordinates and superior within the office or customer. •	Must have good communication Skill.
•	အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူ့ ဖြစ်ရမည်။ Customer များနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	နယ်ခရီး သွားနိုင်ရမည်။ •	Beverage လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိက ဦးစားပေးမည်။
•	Trip Promotion, Media Budget များ Brand Design Creation ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Sales & Marketing Field ထံသို့ ၀င်ရောက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
•	အချိန်ပေးလုပ်ကိုင် နိုင်ရမည် . •	ရုံးလုပ်ငန်း အ တွေ့ကြုံ (၂) နှစ် ရှိရမည်
•	Above2years experience in related field.(Manufacturing Maintenance Engineer) •	Must be able to work in Shwe Pyi Thar industrial Zone.
•	Media နှင့် ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်များနှင့် ဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ •	ကြော်ငြာ Plan များရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	Presentation လုပ်နိုင်ရမည်။ English စာအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ရမည်။ •	On Shop ဆိုင်များသို့သွားနိုင်ရမည်။
R&D Supervisor / Research & Developmnet
•	Above3years experience in related field. •	Communication skill is good.
•	အရောငျးမွှငျ့တငျရေးပိုငျးတှငျ အတှအေ့ကွုံရှိသူ ဦးစားပေးမညျ။ •	လုပျငနျးလိုအပျခကျြအရ နယျခရီးရကျရှညျသှားနိုငျသူ ဦးစားပေးမညျ။ •	လုပျငနျးအပျေါရိုးသားကွိုးစားပွီး သစ်စာရှိရမညျဖွဈပွီး ရရှေညျလကျတှ ...
338 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	Must have good communication skills & Leadership skills. •	Must be able to work in Shwe Pyi Thar industrial Zone.
•	သကဆှိုငရှာလုပငှနှးအတှေ့ အကှုံ နှဈနှဈ နှငှ့အထကရှိရမညှ •	အခှိနပှေးလုပကှိုငနှိုငရှမညှ
•	သကျဆိုငျ ရာလုပျငနျး အတှအေ့ကွုံ (2)နှဈရှိပွီးပေါငျးသငျး ဆကျဆံရေးပွပွေဈသူဖွဈရမညျ။ •	(ရနျကုနျရုံးနှငျ့ မူဆယျရုံးတှငျတာဝနျထမျးဆောငျရနျ)
•	Computer ကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုနိုငျရမညျ။ ပွောဆိုဆကျဆံမှုပွပွေဈ ကောငျးမှနျရမညျ။ •	အကငျြ့စာရိတ်တကောငျးမှနျပွီး ရိုးသားကွိုးစားသူ ဖွဈရမညျ။ •	အခြိနျပေးလုပျကိုငျ နိုငျသူဖွဈရမညျ။
•	အကငျြ့စာရိတ်တကောငျးမှနျပွီး ရိုးသား ကွိုးစားသူဖွဈရမညျ။ •	အခြိနျပေးလုပျကိုငျနိုငျပွီး နယျခရီးသှားနိုငျသူဖွဈရမညျ။
•	Computer ကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုနိုငျပွီး ဆကျဆံရေး ပွပွေဈကောငျးမှနျရမညျ။ •	အခြိနျပိုတာဝနျမြားထမျးဆောငျနိုငျပွီး အပွငျသှားနိုငျသူဖွဈရမညျ။
Work in Yangon Region(913)
Dagon Glory Co., Ltd.(567)